adminSep 15, 2020WARARKA0
Liverpool ayaa sugi doonta ilaa isbuuca ugu dambeeya ee suuqa kala iibsigu xidhmayo ka hor inta aysan si rasmi ah ugu dhaqaaqin saxiixa Thiago Alcantara.
Inkastoo ay sidoo kale xiiseyneyso Manchester United, Reds ayaa la rumeysan yahay inay ugu cad-cadahay saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Bayern Munich.
Laakiin talkSPORT ayaa sheegaysa in kooxda heysata Premier League ay ka go’an tahay inay ciyaaraan kubad wacan si ay ugu helaan 29 jirkan reer Spain qiimaha ugu fiican.
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ogolaatay heshiis 28 milyan ginni ah oo ay kula soo wareegeyso weeraryahanka Lyon Memphis Depay oo la keenayo Camp Nou.
Sida laga soo xigtay Mail Online, Depay, oo 26 jir ah, ayaa lagu wadaa inuu u safro Spain si uu u tijaabada caafimaadka u maro, Barca ayaana rajeyneysa inay soo bandhigto dabayaaqada toddobaadkan.
Gareth Bale ayaa haysta fursad uu amaah ugu biiri karo Manchester United.
Xiddiga reer Wales, oo 31 jir ah, ayaa umuuqda mid waqti aan faa’ido lahayn ku jooga Real Madrid sababo la xidhiidha xidhiidhka xun ee kala dhexeeya tababare Zinedine Zidane.
Inkasta oo mushaharka badan ee Bale hoos loo dhigi karo, The Times ayaa ku warramaysa in United ay urursanayso ciyaartoy khibrad badan leh ka dib markii ay ku jahwareereen raacdada ay ugu jiraan ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
Daily Telegraph ayaa sheegaysa in Aston Villa ay xagaagan qarash gareyneyso £75million iyadoo la soo saxiixaneysa goolhayaha Arsenal Emiliano Martinez iyo weeraryahanka Lyon Bertrand Traore.
Martinez, oo 28 jir ah, ayaa ogolaaday heshiis afar sano ah halka ciyaaryahankii hore ee Chelsea Traore oo 25 jir ah lagu wado inuu dhameystiro ku biiristiisa maalmaha soo socda.
West Brom ayaa ku dhow inay heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah kula soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Conor Gallagher.
Sky Sports ayaa warinaysa in Gallagher, oo 20 jir ah, uu heshiis cusub ku saxiixi doono Stamford Bridge ka hor inta uusan ku biirin kooxda Slaven Bilic isagoo rajeynaya inuu helo boos joogto ah.
Waxa uu u muuqday mid ku sii jeeday Crystal Palace laakiin Roy Hodgson ayaa doortay inuu amaah kula soo wareego weeraryahanka Blues Michy Batshuayi, iyadoo sharciga Premier League uu dhigayo kaliya hal amaah oo ay la soo saxiixan karto koox kale oo heerka sare ah.
Gallagher, oo aan weli u safan kooxda koowaad ee Chelsea, ayaa dhaliyay 6 gool 25 kulan oo horyaalka ah oo uu u saftay Charlton qeybtii hore ee xilli ciyaareedkii hore. Kadib markii dib loogu yeedhay, wuxuu amaah ugu biiray Swansea.
Baggies ayaa sidoo kale wali ka shaqeyneysa heshiis ay ku keenayso ciyaaryahanka xorka ah ee Branislav Ivanovic kooxda Bilic.
Ivanovic, oo 36 jir ah, kana ciyaara daafaca midig ama daafaca dhexe, ayaa ka tagay kooxda reer Russia ee Zenit St Petersburg horaantii xagaagan.
Sky ayaa sidoo kale sheegtay in Torino ay dooneyso inay amaah ku qaadato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira.
Kooxda ka dhisan Serie A ayaa dooneysa inay heshiis hal xilli ciyaareed ah la gasho iyadoo dooq u leh inay iibsadaan xagaaga dambe.
Torreira, oo 24 jir ah ayaa Gunners kaga soo biiray Sampdoria bishii July 2018 adduun dhan 26 milyan oo ginni laakiin wuxuu ku dhibtooday inuu boos joogto ah ka helo shaxda Mikel Arteta ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawac jilibka ah.
Previous PostOdayaal iyo Waxgarad Kasoo jeeda Gobalka Saaxil Oo taageeray Siyaasi Maxamuud Xaashi Next PostCabdilaahi Darawal Oo Ka Hadlay In Dastuurkii La Jabinayo